Sarkaalkii SOMALILAND ka goostay oo dagaal kula wareegay CEEL-AFWEYN - Caasimada Online
Home Warar Sarkaalkii SOMALILAND ka goostay oo dagaal kula wareegay CEEL-AFWEYN
Sarkaalkii SOMALILAND ka goostay oo dagaal kula wareegay CEEL-AFWEYN
Ceel-afweyn (Caasimada Online) – Dagaal culus ayaa ka dhacay agagaarka Saldhigga Degmada Ceel-afweyn ee gobalka Sanaag waxaana la soo sheegayaa inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalkaan ayaa dhaxmaray Ciidamo ka tirsan maamulka Somaliland iyo Sarkaal dhawaan ka goostay Somaliland oo galay keymaha gobalka Sanaag.
Sarkaalkaan weerarka qaaday ayaa lagu magacaabaa Korneel Caarre waxa uuna dhawaan ka baxay Somaliland isaga iyo Ciidamo uu hogaamin jiray, dadka yaqaana ayaa sheegaya in midnimada Soomaaliya uu aaminsan yahay sababaha uu uga baxay Somalilandna ay tahay kala aragti duwanaansho arintaasi la xariirta.
Sidoo kale Sarkaalkaan ayaa la sheegay in khilaaf culus oo kala dhaxeeyo taliyaha Ciidamada Somaliland ayna sababta ugu weyn ee soo dadajisay ka bixitaanka Somaliland ay tahay khilaafkaasi.
Korneel Caarre ayaa u muuqda Jabhad cusub oo ka aas aasan tahay Somaliland waxaase laga baqayaa in dhibaato ay soo food saarto gobalka Sanaag.